Iyo 3GB ye RAM yeiyo iPhone 7 Plus inoonekwa ichienzaniswa neiyo iPhone 7? | IPhone nhau
Iyo 3GB ye RAM yeiyo iPhone 7 Plus inoonekwa ichienzaniswa ne2GB yeiyo iPhone 7? [Vhidhiyo]
Kana ichingoenda kutengeswa uye semazuva ese kana chishandiso chitsva chikatangwa, iyo iPhone 7 yakaedzwa mumhando dzakasiyana dzebvunzo. Mune imwe yeiyi bvunzo taigona kuona kuti huwandu hwakawanda hwe RAM mune iyo Galaxy S 7 isingashandure mukuita zvirinani, asi panguva iyoyo isu takazozivawo kuti kuenzanisa kwanga kusiri kwakaringana. Izvo zvinoita kunge zvakaringana kutarisa kana iyo 3G RAM iPhone 7 Uyezve zvinoonekwa zvine chekuita ne2GB yemunin'ina wake.
Uyu muedzo wakaitwa neYouTube chiteshi PhoneBuff uye, senguva dzose, ivo vaita a kumhanya bvunzo mune izvo zvese zvishandiso zvichafanirwa kuita maviri kutendeuka kwe "dunhu" mavanofanira kuvhura imwe nhamba yekushandisa, zvakafanana mune yega yega terminal. Kana isu tichifunga nezvekuti zvese zvishandiso zvinogovera processor uye inoshanda system, iwe unofunga kuti yakawedzera gigabyte ye RAM yeiyo 5.5-inch modhi ichaonekwa? Iwe une mhinduro muvhidhiyo inotevera.
Kwayedza bvunzo iyo 3GB ye RAM yeiyo iPhone 7 Plus
Sezvauri kuona, mukutenderera kwekutanga mhedzisiro yacho yave kuda kuteverwa, kuhwina iyo iPhone 7 Plus nemazana makumi matatu nematatu chete. Kana isu tikafunga nezve chinhu chevanhu, tinogona kutaura kuti chisungo. Iyo zvinhu zvatoshanduka muround yechipiri, apo maapplication ari kumashure anofanira kuvhurwa. Ndipo pazvinoonekwa kuti iyo 2GB ye RAM yeiyo iPhone 7 haina kufanana ne3GB ye RAM yeiyo iPhone 7 Plus uye yechipiri inopera masekondi gumi pamberi pekutanga.
Pakutanga, vaongorori vakaita saMing Chi Kuo vakati iyo iPhone 7 Plus yaizove ne3G ye RAM nekuti yaizoda iyo yekuwedzera gig kubata ruzivo rwakatorwa ne yemhando yepamusoro kamera, asi ini handigoni kubatsira asi kufunga kuti Apple yanga ichida kupa yayo hombe iPhone iyo yekuwedzera kuita kuti itikoke isu titenge iyo inodhura kwazvo iPhone. Uye, kudzamara iPhone 6s, iyo 5.5-inch iPhone yaive neakadzikira mashandiro kupfuura iyo 4.7-inch modhi, saka iyo Plus modhi yaingove yepamusoro pane yakajairwa modhi nekuda kwayo yeiyo optical mufananidzo stabilizer (OIS) uye bhatiri rayo. Uri kushamiswa here nemhedzisiro iyi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyo 3GB ye RAM yeiyo iPhone 7 Plus inoonekwa ichienzaniswa ne2GB yeiyo iPhone 7? [Vhidhiyo]
Apple inobvisa chizvarwa chechitatu Apple TV kubva mukutengesa
Chinja yako yakakombama iPhone 7 kune imwe yakati sandara mumatanho matatu ari nyore